သူပြျောနရေုံနဲ့ ကိုယျအဆငျမပွလေဲ ဖွဈပါတယျလို့ တှေးနသေူတှဖေတျဖို့ …. – Shinyoon
သူပြျောနရေုံနဲ့ ကိုယျအဆငျမပွလေဲ ဖွဈပါတယျလို့ တှေးနသေူတှဖေတျဖို့ ….
December 6, 2020 by Shin Yoon
အခဈြဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတဈခုအောကျမှာ ဘယျလောကျကွာကွာ ကိုယျငိုခဲ့ရဖူးပွီးပွီလဲ တှေးကွညျ့ပါ ။ သူက ကိုယျမရှိလဲ ဖွဈနမှေနျးသိသိရဲ့နဲ့ … ကိုယျ့မှာ သူမရှိရငျ မဖွဈလို့ပါဆိုတဲ့ စိတျကို လကျကိုငျထားပွီး နာကငျြရဲ့နဲ့ ဆှဲထားတဲ့လကျတှေ ဘယျလောကျတောငျ ကွာနပွေီလဲ ။
သူပြျောနရေုံနဲ့ … သူ့ကို ခဈြနရေရုံနဲ့ ဖွဈတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့အနာဂတျတှဟော မှောငျနတေတျတယျ ။ နနေ့ညေ့ည မကျြရညျတှဖေုံးနတေဲ့ မကျြလုံးတှဟော အမှနျကို မမွငျနိုငျတော့သလို ပြျောရှငျမှုကို မသိနိုငျတော့ဘူးလေ ။ အနာဂတျလို့ တှေးကွညျ့ပါ သူမပါတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အနာဂတျပေါ့ .
အရာရာပေးဆပျရငျး ပေးဆပျရငျးကနေ ကိုယျကိုယျတိုငျ ပြောကျဆုံးမှနျးမသိ ပြောကျဆုံးသှားတတျတဲ့ သာဓက အမြားကွီးရှိတယျ … အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယျက တဈယောကျပါမသှားပါစနေဲ့ ။ သူပြျောနရေုံဆိုပမေယျ့ ကိုယျလဲ ပြျောအောငျ နတေတျဖို့ လိုတယျ ။ သူ့ကို ခဈြနရေုံဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျခဈြတတျဖို့လိုသေးတယျ ။
လှညျ့မထှကျရဲတဲ့သူကို လှညျ့ထှကျခဲ့လိုကျပါလို့ပွောတဲ့အထိ ကြှနျမ မရကျစကျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကို ဂရုစိုကျတာတှရေဲ့ ဆယျပုံ ပုံ တဈပုံလောကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျဂရုစိုကျပေးကွညျ့ပါ ။ သူ့ကို ကွညျ့နတေဲ့ မကျြလုံးတှေ ခဏလှဲပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျကွညျ့ကွညျ့ပါ ။
အတိတျကိုကော အနာဂတျကိုကော ယှဥျတှဲပွီးတဈခါလောကျ တှေးကွညျ့ပါ ။ ကိုယျဟာ လူတဈယောကျကိုခဈြရငျးနဲ့ တကယျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြောကျဆုံးမှနျးမသိ ပြောကျဆုံးသှားတတျတယျ ။ ပွုံးခဲ့ဖူးတဲ့ နှုတျခမျးတှဟော မဲ့မှနျးမသိ မဲ့သှားတတျတယျ ။
အပေါငျးအသငျးမြားခဲ့တဲ့လူတှဟောလဲ အဖျောမဲ့မှနျးမသိ မဲ့လာတတျတယျ ။ ခဈြတာကတော့ ခဈြတာပေါ့ ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလဲ ခဈြတတျဖို့ လိုနသေေးတယျ ။
သူပျော်နေရုံနဲ့ ကိုယ်အဆင်မပြေလဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ တွေးနေသူတွေဖတ်ဖို့ ….
အချစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုယ်ငိုခဲ့ရဖူးပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါ ။ သူက ကိုယ်မရှိလဲ ဖြစ်နေမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ … ကိုယ့်မှာ သူမရှိရင် မဖြစ်လို့ပါဆိုတဲ့ စိတ်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး နာကျင်ရဲ့နဲ့ ဆွဲထားတဲ့လက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ကြာနေပြီလဲ ။
သူပျော်နေရုံနဲ့ … သူ့ကို ချစ်နေရရုံနဲ့ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အနာဂတ်တွေဟာ မှောင်နေတတ်တယ် ။ နေ့နေ့ညည မျက်ရည်တွေဖုံးနေတဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ အမှန်ကို မမြင်နိုင်တော့သလို ပျော်ရွှင်မှုကို မသိနိုင်တော့ဘူးလေ ။ အနာဂတ်လို့ တွေးကြည့်ပါ သူမပါတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ပေါ့ .
အရာရာပေးဆပ်ရင်း ပေးဆပ်ရင်းကနေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျောက်ဆုံးမှန်းမသိ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်တဲ့ သာဓက အများကြီးရှိတယ် … အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ်က တစ်ယောက်ပါမသွားပါစေနဲ့ ။ သူပျော်နေရုံဆိုပေမယ့် ကိုယ်လဲ ပျော်အောင် နေတတ်ဖို့ လိုတယ် ။ သူ့ကို ချစ်နေရုံဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ချစ်တတ်ဖို့လိုသေးတယ် ။
လှည့်မထွက်ရဲတဲ့သူကို လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အထိ ကျွန်မ မရက်စက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဂရုစိုက်တာတွေရဲ့ ဆယ်ပုံ ပုံ တစ်ပုံလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဂရုစိုက်ပေးကြည့်ပါ ။ သူ့ကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေ ခဏလွဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ ။
အတိတ်ကိုကော အနာဂတ်ကိုကော ယှဉ်တွဲပြီးတစ်ခါလောက် တွေးကြည့်ပါ ။ ကိုယ်ဟာ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ရင်းနဲ့ တကယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျောက်ဆုံးမှန်းမသိ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ် ။ ပြုံးခဲ့ဖူးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ မဲ့မှန်းမသိ မဲ့သွားတတ်တယ် ။
အပေါင်းအသင်းများခဲ့တဲ့လူတွေဟာလဲ အဖော်မဲ့မှန်းမသိ မဲ့လာတတ်တယ် ။ ချစ်တာကတော့ ချစ်တာပေါ့ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ချစ်တတ်ဖို့ လိုနေသေးတယ် ။
မိနျးမသားတဈယောကျရဲ့ သနျမာမှု …